ပိတ်ထားရေ ဝပ်ဆိုက်ကို ကြည့်ချင်ကေ | Great Arakan
၂၀၂၁ ခုနှစ်စွာ ကုလသမဂ္ဂသမိုင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံး အငတ်ဘေးကတ်နှစ် ဖြစ်လာဖို့
အမေရီကန်သမ္မတနန့် ဖက်ဆ်လေဒီမှာ ကိုဗဲ့ဒ် တွိ
ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ဒုတိယအကြိမ် ထပ် အကူးခံရစွာ ကဗာမှာ ပထမဆုံး ဟောင်ကောင်မှာ တွိ
အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရဲစခန်း မီးတိုက်ခံရလို့ စစ်အမိန့်ထုတ်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကို အမေရီကန် အဆက်အသွယ်ဖြတ်
ရခိုင်စစ်ဖီးရှောင်တိအတွက် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ဂီတပွဲ
စုကြည်က ရခိုင်သပုန်တိကို အမှုန့်ခြီပလိုက်လို့ စစ်တပ်ကို ပြော ဆိန်ကာပေါ် သတင်းမှာ ဖော်ပြ
ငဖဲမြို့နယ် စပ်စီရွာအနားမှာ ကားလမ်းပြိုကျလို့ ရခိုင်ပြည်ကို လားရေ ကားတိ ပိတ်မိနိန်
မင်းပြားမြို့နယ်မှာ ရီလွှမ်းနိန်ရေ ကျေးရွာတိအတွက် စက်လှေနန့် အစားအသောက်တိ လိုအပ်နိန်
ရခိုင်ပြည်မှာ အထက်တန်းပြဆရာ ၆၀၀ ကျော် လိုအပ်နိန်
ငါရို့ ဇာဖြစ်လို့ သူများတိ နောက်မှာ ကျန်ခလေ?
ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် နန့် ဘာသာရေး
ပိတ်ထားရေ ဝပ်ဆိုက်ကို ကြည့်ချင်ကေ
ငါရို့ တိုင်းပြည်ကို ဇာပိုင် တည်ဆောက်ကတ်ဖို့လဲ? (၂)
ငါရို့ တိုင်းပြည်ကို ဇာပိုင် တည်ဆောက်ကတ်ဖို့လဲ? (၁)
Huawei ကို US ပိတ်ပင်စွာ တရုတ်နည်းပညာ ပိုမြင့်လာအောင် လုပ်စွာနန့် တူနိုင်
5G နည်းပညာကို ယူအပ်ဆ်က နြူးကလီးယားဗုံးပိုင် သဖောထားရေလို့ ဝါဝေ စီအီးအို ပြော
ဝီကီလိခ်ဆ် တည်ထောင်ခရေ ဂျူလီယံ အပ်ဆ်ဆန်း အဖမ်းခံရ
ဟီးသရိုးလေဆိပ် ဧပြဲလ်လမှာ ခရီးသယ် ၉၇% ကျလား
အမေရီကန် ရနံစိမ်း ၁ စည် ၁၆ ဒေါ်လာအောက် ကျဆင်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် နောက်မှာ ကပ်ပါလာဖို့ ပြဿနာတိ
ကဗာ့စီးပွားရေး ၃ ပုံ ၁ ပုံကို တရုတ် အိန္ဒိယ ချုပ်ကိုင်လာဖို့
အာရှမှာ အစာပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းဖို့၊ လာဖို့ ၁၀ နှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၈၀၀ ဘီလီယံ ရင်းနှီးဖို့လို
အမေရီကန်လုပ် အစိတ်အပိုင်း လုံးဝမပါရေ ဖုန်းတိကို Huawei စထုတ်ဗျာလ်
ကိုးဗဲ့ဒ်-၁၉ အိုမီခြွင် နန့် ဒဲလ်တာ ဇာကွာခြားလားလေ?
ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ဖြစ်ကေ အိမ်မှာ ဇာပိုင် ပြုစုရဖို့လဲ?
ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် အမှောင်ခန်းထဲမှာ ၂၈ ရက်ကြာ အသက်ရှင်နိုင်
ကဗာကြီး တခေတ်ဆန်းဖို့ 2nm chip ကို IBM တွိ
ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် A သွီးအုပ်စုက အသက်ရှူကျပ် အဖြစ်နိုင်ဆုံးလို့ တွိ
ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် လူနာ ယောကျ်ားတိ မျိုးရည်မှာ တွိ
ငှက်ဖျား အဆုံးသတ်ဖို့ နည်းလမ်းတွိ
သီရေးရှင်ရေး အကျဉ်းအကျပ်ထဲ အသက်ရှင်ဖို့ စိုက်ပျိုးနည်း
အလွယ်ကူဆုံး လက်တွန်း မြေဆွစက်
ရခိုင်ပြည်မှာ ငါး ရှားပါးလာစွာ ငါရို့နန့် ဇာဆိုင်လို့လဲ
AI မှတ်ဉာဏ်တု ဆိုစွာ ဇာလဲ?
တရုတ်မှာ ၃ ဖက် ပုံနှိပ်စက်နန့် ကဗာ့အကြီးဆုံး အိမ်ကို စဖန်တီး
၂၀၁၉ ထုတ် အလီးအများကြီး မ,နိုင်ရေ ဒရုန်း ၁၀ စင်း
တရုတ်လုပ် စိန်တိ ကဗာ့စျီးကွက်ကို လွှမ်းမိုးဖို့ အသင့်
AllCraftsFarmingFood and RecipesFurnitureGardenHome DecorIdeas
ပိုးသတ် လက်ဆီးဆီ ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲ
အပင်နန့်ဆိုင်ရေ ဆွဲထုတ်တွိရှိချက် ၁၂ ခု
သေနတ်က ဖုန်းထက်တောင် စျီးတန်ရေ ပါကစ္စတန်က မြို့ချေတမြို့
ကိုယ်တိုင် ထွင်ထားကတ်တေ စိုက်ပျိုးရေးသုံး စက်တိ
အာလူတူးစက် ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲ?
တခါတည်း အတန်း ၄ တန်း အစိကြဲနိုင်ရေ စက်လုပ်နည်း
အနာဂတ်မှာ ကဗာကျော် ဖြစ်လာနိုင်ရေ အထူးအားတိုးစာ ပရစ်ကျော်
ငပျောသီး ပေါင်မှုန့် နန့် ငပျောသီး အိုက်ဆခြိမ်း ကိတ် လုပ်နည်း (ရုပ်သံ ၁ မိနစ် ၁၄…
ပဲပင်ပေါက်ပင်ကို ပလက်စတိတ် ဗူးချေ တလုံးနန့် ဇာပိုင် ဖောက်ဖို့လဲ? ( ၁၀ မိနစ် ရုပ်သံ )
ထိုင်းနိုင်ငံ အုန်းသီးစက်ရုံ တခုက အုန်းသီး ထုတ်နိန်ပုံ စဆုံး ( ၅ မိနစ် ၃၈ စက္ကန့်…
အိုက်စ်ကရိမ်းလိပ် ဟုတ်လာ? အချိန် ၁ မိနစ် နန့် လုပ်နည်းကို အေမှာ သင်ပါ
၁၅ ပေ x ၁၅ ပေ ပတ်လည် အိမ်ချေတလုံးမှာ နိန်ဖို့ မဖြစ်နိုင် ဟုတ်လာ?
ခြံကျကျဉ်းချေမှာ အိမ်အလှပချေ ဆောက်ချင်ရေ လူတိအတွက်
ရခိုင်ပြည်မှာ မှိုပိုင် ပေါလာဖို့ အိမ်တိ
လှလှပပ မီးလုံး အကာချေတိ ဇာပိုင် လုပ်ကတ်လေ?
အနောက်နိုင်ငံက ဂေါင်းအုံးတိ ကောင်းရရေ လျှို့ဝှက်ချက်
စီးပွားဖြစ် ပဒဂါသီး စိုက်ခင်းတခု ( ရုပ်သံ ၅၇ စက္ကန့် )
ပဒဂါပင်ကို လီမှာ စိုက်တေ နည်းပညာ စဆုံး ( ၄ မိနစ် ၅၀ စက္ကန့် ရုပ်သံ…
ယူကေက နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာ စိုက်ခင်းတခု ( ၃ မိနစ် ၂၈ စက္ကန့် ရုပ်သံ )
အိုးနန့် ဇာအပင်တိ စိုက်လို့ရလေ? အတွေးသစ်အတွက် နမူနာ အပင် ၂၆ မျိုး
ကင်းစွန်းဥ ၁ ဥက ပိဿာချိန် အများကြီးရအောင် ဇာပိုင် စိုက်ဖို့လဲ
အိုးသုတ်ဖတ်က ဂျီးတိ ပြောင်လားဇီချင်လာ?
ကြွီလောင်ဗွန်းတိ၊ ကြွီခွက်တိကို ပြောင်လက်ဇီချင်လာ?
ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် ၂,၀၀၉ သီပနာ ၇၅,၁၁၇ ထိ ကူးစက်လာ
ကိုယ့်လိုင်စောင်းနိန်စွာကို ဇာပိုင် ပြင်ဖို့လဲ
အသက် ၃၀ အထက် အပျိုကြီး တရုတ်မတိ အဖော်ရှာဖို့ “အချစ်ခွင့်” တရားဝင် ပိုပီး
လာဖို့ ၁၅ နှစ်အတွင်းမှာ လက်ရှိအလုပ်အားလုံး တဝက်လောက် ပျောက်လားဖို့ တရုတ်မှတ်ဉာဏ်တုဆရာကြီး သတိပီး
ဂျပန်မှာ ငါးတကောင်ကို ဒေါ်လာ ၃.၁ သန်း ပီးဝယ်
မလေးရှားဘုရင် ရာရှား အလှမယ်ကို လက်ထပ်ပနာ ထီးနန်းကို စွန့်လွှတ်
ငပျောသီး အိုက်စ်ကရိမ်း ဇာပိုင် လုပ်ဖို့လဲ? နမူနာ ၄ မျိုး
ကညွှတ်နန့် ပဇွန်ကို ရောကျော်ဗျာလ် သံဖရာရည် ဖြန်းပနာ စားချင်လာ
ပဇွန် ထမင်းကျော် စားချင်လာ
ဒုက္ခသည်တိ နယ်စပ်မှာ ဇာပိုင်လိမ်ရဖို့လို့ အန်ဂျီအိုက သင်ပီးရေ သက်သီ အသံဖိုင်ထွက်လာ
ယူအတ်ဆ်ကို ဝင်ဖို့ ချီတက်လာရေ လူတန်းကို စစ်သား ၁၅,၀၀၀ နန့် နယ်စပ်မှာ တားဖို့
၂၀၂၀ နှစ်လယ်မှာ ကဗာ့လေကြောင်း အသုံးအများဆုံး သရဖူကို တရုတ်က အမေရီကန်ဘားက လုယူဖို့
ညအိပ် အလည်လာရေ နိုင်ငံခြားသားတိ ဖေသာ အများဆုံး သုံးရေ မြို့ကြီး ၁၀ မြို့
၂၀၁၈ ခုနှစ် ကဗာ့ဖလားဘောလုံးဖွင့်ပွဲ မတိုင်ခင် ရာရှားသမ္မတ နန့် ဆော်ဒီအိမ်ရှိမင်းသား တွိဆုံ
၂၀၁၈ ခုနှစ် ကဗာ့ဖလား တိုက်ရိုက် ထုတ်လွင့်မှု
ကဗာ့ဖလား ဂျာမဏီ နိုင်ဖို့များ – ဂျာမန်ဘဏ် သုံးသပ်တေ လူတိ ဆို
ချဲလ်ဆီး ဘောလုံး ကလက်ဘ် ပိုင်ရှင် ရာရှန်း ဘီလီယံနာ အစ္စရေးနိုင်ငံသား ဖြစ်လာ
ကဗာ့ဖလားဘောလုံး ဖွင့်ပွဲမှာ ပထမဆုံး ရာရှား ကလိမ့်မေချတိ ဘောလုံးကောက်ဖို့
သတင်းတုတခု လုပ်ဖို့ ဇာပိုင် လွယ်လေ?
ဓါတ်ပုံကို အမာ မျက်နှာပြင်တခုခုထက်ကို ရေရှည်ခံအောင် ပြောင်းချင်လာ?
Home Blogs ပိတ်ထားရေ ဝပ်ဆိုက်ကို ကြည့်ချင်ကေ
နည်းပညာတိုးတက်တေ ခေတ်မှာ ပိတ်ထားရေ ဝပ်ဆိုက်တိကို ဖွင့်ကြည့်ဖို့ အလွယ်ချေပါ။ VPN နန့် ဖွင့်ကြည့်စွာတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါဖို့။ ယကေလည်း ရှုပ်ထွေးခက်ခဲစွာတိကို မပြောဘဲ၊ အလွယ်ကူဆုံး နည်း ၂ မျိုးကို ပြောပြပါမေ။
၁) Google Translate သုံးနည်း
အမှန်က Google Translate ကို ဘာသာပြန်ဖို့ သုံးစွာပါ။ ယကေလည်း Google Translate ကို သုံးပနာ ပိတ်ထားရေ ဝပ်ဆိုက်တိကို ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါရေ။ ကြည့်ပုံကြည့်နည်းက …
က) အယင်ဆုံး browser’s address bar မှာ https://translate.google.com/ လို့ ရိုက်ပနာ Google Translate Website ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ခ) ဘယ်ဖက်ခြမ်းက ဘာသာစကားနိန်ရာမှာ English မဟုတ်ဘဲ၊ တခြားဘာသာတခုခုကို ရွီးပါ။ ညာဖက်ခြမ်းက ဘာသာစကားနိန်ရာမှာ English လို့ ရွီးလိုက်ပါ။
ဂ) ဘာသာပြန်ချင်ရေ အကွက်ထဲမှာ ကြည့်ချင်ရေ ဝပ်ဆိုက်လိပ်စာ(ဥပမာ- https://bbc.com)ကို ထည့်လိုက်ပါ။
ဃ) ညာဖက်က ဘာသာပြန်ထားရေ အကွက်ထဲမှာ ယင်းဝပ်ဆိုက်လိပ်စာကို လိင့်ခ်ပါဗြီးသား ထွက်လာပါလိမ့်မေ။ ယင်းလိင့်ခ်ကို နှိပ်လိုက်စွာနန့် ယင်းဝပ်ဆိုက်ကို ရောက်လားပါလိမ့်မေ။
၂) ဝပ်ဆိုက် IP Address သုံးနည်း
ဝပ်ဆိုက်ကို ပိတ်ကေ၊ domain name URLs ကို သုံးပနာ ပိတ်စွာ များပါရေ။ domain name URLs ဆိုစွာက browser’s address bar မှာ ထည့်ထားရေ၊ ဥပမာ https://bbc.com ဆိုစွာမျိုးကို ပြောစွာပါ။ အမှန်က domain name ဆိုစွာ IP address ကို ငုံထားရေ အကာရာ ဖြစ်ပါရေ။ ဝပ်ဆိုက်တိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် IP address ရှိကတ်ပါရေ။ IP address ကို သိချင်ကေ …
က) Command Prompt ကို admin အနိန်နန့် ဖွင့်ဗျာလ်၊ ယင်းအထဲမှာ tracert လို့ ရိုက်ပနာ နောက်မှာ ဖွင့်ချင်ရေ domain name (https://bbc.com) ထည့်ဗျာလ် Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
ခ) အထက်က ပုံမှာ ပြထားရေပိုင် domain name (bbc.com) ဆိုစွာ နောက်မှာ IP address (151.101.64.81) ဆိုစွာကို တွိပါလိမ့်မေ။
ဂ) ယင်း IP address (151.101.64.81) ကို domain name URL မှာ ထည့်ပနာ Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ဝပ်ဆိုက် ပွင့်လာပါလိမ့်မေ။
မှတ်ချက် – MacBook တိမှာ ဆိုကေ Terminal ကို ဖွင့်ဗျာလ် tracert အစား traceroute လို့ ရိုက်ပနာ၊ နောက်မှာ ဖွင့်ချင်ရေ domain name ကို ထည့်ဗျာလ် Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
Previous articleအမေရီကန် ရနံစိမ်း ၁ စည် ၁၆ ဒေါ်လာအောက် ကျဆင်း
Next articleကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် အမေရီကန် စမ်းသပ်ဆီး မအောင်မြင်
Great Arakan Website ကို ရခိုင်လူမျိုးတိ အသိပညာ တိုးစီဖို့၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဟာရ ဖြစ်စီဖို့ ရည်ရွယ်ပနာ ဖန်တီးထားပါရေ။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ နည်းပညာ၊ ဂီတ၊ ရသ၊ မိုးလေဝါသ ရို့ကို အခန့်သင့်ရေပိုင် တင်ပြပီးလားပါမေ။ ရခိုင်လူမျိုးတိအတွက် ကိုယ့် အသိပညာ၊ ရသ၊ ခံစားချက်တိကို ရခိုင်ပိုင် အားရပါးရ ရွီးချင်ရေ မိတ်ဆွေရို့ Log in ကို နှိပ်ပနာ Facebook ၊ Google+ ၊ Twitter အကောင့် တခုခုနန့် ချက်ချင်း Register လုပ်ပနာ မျှဝီရွီးသားနိုင်ပါရေ။
Contact us: contact@greatarakan.com